PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Ngeke iKhabhinethi iphazanyiswe isinqumo senkantolo - ANC
Ngeke iKhabhinethi iphazanyiswe isinqumo senkantolo - ANC
UMHOLI wophiko lwabesifazane lwe-ANC KwaZulu-Natal, uNkk Nomagugu Simelane-Zulu uthe uNdunankulu uWillies Mchunu nesigungu sakhe songqongqoshe bayaqhubeka nokusebenza ngoba uMchunu uqokwa esiShayamthetho.
UNkk Simelane-Zulu, uthe uhulumeni oholwa nguMchunu awuthinteki esinqumeni senkantolo yaseMgungundlovu esichithe ubuholi obakhethwa engqungqutheleni yangoNovemba 2015.
Uthe isigungu sesifundazwe sinamandla, amandla asiwathathi esigungwini sikazwelonke se-ANC.
Izifunda uthe yizona ezithatha amandla esigungwini sesifundazwe yingakho isifundazwe sikwazi ukuphuca amandla izifunda.
“UNdunankulu uvotelwa esiShayamthetho, ngakho isinqumo senkantolo asinamthelela ekusebenzeni kwakhe nesigungu asiqoka.
Ube eseqoka ongqongqoshe azosebenza nabo nakhona isinqumo asinamthelela ngoba akakhethwa isigungu sesifundazwe se-ANC,” kusho uNkk Simelane-Zulu.
Usho lokhu nje uhlangothi oluvunwe inkantolo, oluzwelana nowayengundunankulu uMnuz Senzo Mchunu lufuna kuchithwe zonke izinqumo ezathathwa ubuholi bukaMnuz Sihle Zikalala, onguSihlalo we-ANC esifundazweni.
Ezinye zalezi zinqumo zifaka ukushintshwa kwekhabhinethi njengoba kwasuswa abanye ongqongqoshe kwafakwa abasha.
Abanye abasuswa kubalwa uNkk Peggy Nkonyeni, kwezemfundo kwafakwa uMnuz Mthandeni Dlungwane. UZikalala wangena esikhundleni sikaMnuz Mike Mabuyakhulu. Omunye owasuswa uMnuz Cyril Xaba, ozwelana noMchunu eMnyangweni wezoLimo kwafakwa uMnuz Themba Mthembu, onguNobhala wamaKhomanisi esifundazweni.
UMchunu (Senzo) wachithwa kwesobundunankulu kwafakwa uMchunu (Willies).
USihlalo we-ANC Youth League, uMnuz Kwazi Mshengu uqinisekise umphakathi ukuthi isinqumo senkantolo ngeke sibe nomthelela kuhulumeni.
“Undunankulu neKhabhinethi yakhe bayaqhubeka nokuhambisa izidingo kubantu esifundazweni.”